U kala wareejinta Gawaarida waxay ku jiri doonaan Kocaeli! - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliWaxaa jiri doona kala wareejin udhaxeysa basaska Kocaeli!
16 / 01 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
kocaelide wuu wareejin doonaa baska
Isaga oo ka hadlaya isku darka isku dhafka nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli, Duqa Magaaladda Metro Tahir Büyükakın wuxuu yiri, “Rakaabku waxay awoodi doonaan inay ku wareegaan gaari kale oo u dhexeeya basaska.”
Shirkii Golaha Dawladaha Hoose ee Magaalada, Tahir Büyükakın wuxuu soo saaray bayaan ku saabsan aruurinta baabuurta gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli hal haro. Büyükakın wuxuu yidhi "fikir kama lihin inaanu wadaagno dakhliga taraamka" ayuu yidhi Büyükakın.
“Barkad baa la abuuri doonaa. Xuquuqdaani waa kuwa aan caadi aheyn. Basaska ku safraya wadooyinka caadiga ah waxay u dhacaan si ay u gaadhaan tanaasul dhexdooda ah. Haddii aan siino gaadiid xaalad leh oggolaansho cusub, haddii aan u rogi karno qandaraas sharci gaar ah, waxaan fursad u yeelan karnaa inaan u aadno qodobbada aan la socon karin isla tirada gawaarida aan haysano.
Wareeg ka socota degmada oo loo gudbinayo degmo, laakiin markii aan isku darno khadadka, waxaan sidoo kale awood u yeelan doonnaa inaan ku wareejinno. Rakaabku waxay awoodi doonaan inay ku wareegaan gaari kale oo u dhexeeya basaska. Gawaaridan waxay yareyn doonaan ciriiriga waxayna rakhiis u noqon doonaan rakaabka. Taraamku waa meesha aan ku xirno. Gawaarida ka yar, qiiqa oo yaraada. Iskaashatada ayaa tan siiya ogolaanshaha.
Waxaan dhisi doonnaa barkad guud. Tani waxay ka bilaabmi doontaa xarun ahaan Izmit. Qof kastaaba wuxuu qaybtiisa ka qaadan doonaa barkadda inteeda badan sida rakaabka uu qaado. Garsoorka ma ogolaanayo tan, in kasta oo aanan haysan fikrad aan ku wadaagno dakhliga taraamka. Iskaashatada ma laha codsi noocan ah.
Wareejin lacag la'aan ah oo ka timid Tram-ka oo laga soo galo Kocaeli
Kaaliyaha Wakiilka Kocaeli: Waddada cusub waxay noqon doontaa isku xirka Kocaeli ilaa 8
Basaska waxaa lagu nadiifinayaa tikniyoolajiyadda nano ee Kocaeli
Kobanheegan ee Kobanheegan wuxuu noqonayaa ilaha kaydka
Basaska leh Calaamadaha Farxada ee Kocaeli
Xarunta Dhismaha Wagon ayaa noqon doonta xarun lagu wareejiyo tuulada
Basaska iyo taraamyada waxay noqon doonaan kuwo bilaash ah illaa iyo inta laga gaarayo GaziantepKart
Beddelka Bilaashka ah ee u dhaxeeya IBB iyo Bus-Metro
IZBAN iyo xawaaladda wareejinta tareenada
Si loogu wareejiyo xarunta wareejinta Hilal gudaha xadka Nidaamka Xaafadda İzmir 13
IZBAN Saldhigga Saldhigga ee Hilal wuxuu ku shaqeyn doonaa sidii Halkapınar loo wareejiyo
Qorshaha Dhismaha Dhismaha Dhismaha Dogus
Wasiirka Caglayan: Mersin waa mid ka mid ah xarumaha ugu kala wareejinta iyo saadka ee adduunka…
Isku-darka nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli
U kala Gudbi Basaska